Global Voices teny Malagasy · 9 Mey 2019
09 Mey 2019
Novambra 2021 49 Lahatsoratra
Oktobra 2021 50 Lahatsoratra
Tantara tamin'ny 09 Mey 2019
@ActLenguas : Elias Ajata sy ny tolony hamantarana ny aymara amin'ny aterineto, ny 6 ka hatramin'ny 12 mey 2019
Mediam-bahoaka09 Mey 2019
"Tsy tokony ho any an-trano ihany no ampiasana ny fitenintsika, fitaovam-pampitana karazam-pahalalàna maro io".
Nanavotra olona an'arivony ny fiomanana rehefa namely ny morontsiraka atsinanan'i India ny rivodoza Fani
Azia Atsimo09 Mey 2019
Ain'olona maro no voavonjy tamin'ny faharavana vokatry ny rivodoza mahery vaika Fani noho ny famindran-toerana efa voahomana nataon'ny fitondram-panjakana tao an-toerana niaraka tamin'ny fanohanan'ny mpialatsaka an-tsitrapo an'arivony.
Nofoanana tampoka ny fanasana hiantsafa tamin'ny fandaharana fahitalavi-panjakana rosiana fa hay vehivavy ny filoha tale jeneralin'ny orinasa BlablaCar
Eoropa Afovoany & Atsinanana09 Mey 2019
Mbola lavitra ny lalan'i Rosia eo amin'ny resaka fitovian'ny lahy sy ny vavy.
Tongasoa amin'ny tontolom-bilaogy libaney
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana09 Mey 2019
Nefa amin'izany fotoana izany, samy mitahiry ny mahalibaney tsy voafehy daholo ry zareo, karazam-pankamamiana ho an'ny tanindrazany, eritreritra feno fanantenana fa indray andro any hiposaka indray ny masoandron'ny tanin'ny [hazo] sedera.
Eo am-pitendrena i Torkia…. Fitsarana iray iankinan'ny hoavin'ny fahalalaham-pitenenana
(Lahatsoratra teny anglisy tamin'ny 24 desambra 2005) Raha maro ny Tiorka tsy mankalaza krismasy, maro indrindra fa ireo mpianatry ny oniversite no manararaotra ny fialan-tsasatry ny ririnina hitodi-doha hody ka handany ny andro miaraka amin'ny fianakaviany. Henika ranomandry i Istanbul ary mahita sary an-tsaina aho fa olona maro no miala voly sy mamory ny...
Ny Taombaovao Shinoa tany Malezia
Azia Atsinanana09 Mey 2019
Tsy maintsy misy ny fiaraha-misakafo hariva mandritra ny alin'ny Taombaovao Shinoa